Huawei Y7p Aurora Blue (4GB/64GB) ~ ICT.com.mm
HomeHuawei Y7p Aurora Blue (4GB/64GB)
Huawei Y7p Aurora Blue (4GB/64GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Size: 6.39 inches Resolution: 270 x 1560 pixels Chipset: Hisilicon Kirin 710F (12 nm) GPU: Mali-G51 MP4 Operating System: Android 9.0 (Pie) (AOSP + HMS), EMUI 9.1 RAM:... [Learn more]
Brand: HuaweiFilter by: Android Phones, MK
Resolution: 270 x 1560 pixels
Operating System: Android 9.0 (Pie) (AOSP + HMS), EMUI 9.1
Rear Camera: 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide),2MP (depth)
Huawei Y7p ဟာ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၊ အလန်းစားကင်မရာစနစ်နဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဒေတာသိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်း တို့ကို ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ရရှိအောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.39 လက်မ ရှိပြီး IPS LCD Display အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Resolution-720 x 1560 pixels ရရှိတဲ့အတွက် ကြည်လင်လှပတဲ့ HD ရုပ်ထွက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ System ပိုင်းအတွက် Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset အပေါ်မှာ Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Apps တွေကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ RAM 4GB က ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပြီး ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်အတွက် Mali-G51 MP4 GPU ဂရပ်ဖစ်ကတ်က အကောင်းဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်လို့ Mobile Game သမားတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ကင်မရာပိုင်းမှာ အလန်းစား ကင်မရာသုံးလုံးပါစနစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide)နဲ့2MP (depth) ကင်မရာတို့ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ပရိုကျတဲ့ ရိုက်ချက်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး AI နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် လှပသည်ထက် လှပအောင် ဖန်တီးရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဖက်မှာ 8MP ရှိ Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပြီး အသေးစိတ်လှပတဲ့ HDR ပုံရိပ်တွေ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒေတာအမြောက်အများ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် 64GB Internal Storage ကို ထည့်သွင်းထားပြီး SDcard အသုံးပြုကာ 512GB အထိ Upgrade ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် Android စနစ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားတာကြောင့် ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ ဘတ္ထရီပိုင်းအတွက် 22 နာရီကြာ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Li-Po 4000 mAh ဘတ္ထရီကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Colorful design and unique design
The HUAWEI Y7p isalight-weight backbone, with an unprecedented backlight design and integrated with Nano-Texture technology. The 2.5D and the 2.5D model makeadifference. It was like openingacolorful door.
Punch FullView screen 2
6.39 inches4Punch FullView screen offers three HUAWEI Y7p ratio is 90.15% B-body5withamore wide screen can provide. Huawei's innovative single-screen technology, the front camera, covers the front. This will allow you to experience the most uninterrupted experience possible.
Photography with AI
AI's advanced technology recognizes over 500 different types of 21 different objects with justacamera and automatically adjusts them to get the best picture possible.7Now, everyone can beaphotographer.
The back of the HUAWEI Y7p hasafingerprint sensor to make it easier and more secure. Once your thumb is pressed, it's ready for use.